कक्षा ११ को नतिजा प्रकाशित – Khabar Silo
कक्षा ११ को परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले केहिबेरअघि नतिजा प्रकाशित गरेको हो ।कक्षा ११ को परीक्षा गत जेठमा भएको थियो । देशभरबाट पाँच लाख नौ हजार परीक्षार्थी सहभागी थिए । बोर्डले अघिल्लो वर्षभन्दा यसपालि नतिजा छिटो प्रकाशित गरेको हो ।यसअघि कक्षा १२ को परीक्षा पनि अघिल्लो वर्षभन्दा छिटो प्रकाशित भएको थियो ।
डा.बाबुराम भट्टराईले कक्षामा यसरी पढाए राजश्वका कर्मचारीलाई
काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषदका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई राजश्व प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई कक्षा लिएका छन् । शुक्रबार ललितपुरमा तालिमका क्रममा रहेका कर्मचारीलाई मुलुकको अर्थ–राजनीतिका विविध विषयमा प्रशिक्षण दिएका हुन्। वर्तमान विश्व आर्थिक प्रणाली, नेपालको आर्थिक अवस्था, नेपालको अर्थ-राजनीतिक भावी कार्यदिशा कसरी अगाडि बढाउने, राजनीतिक प्रणालीले आर्थिक प्रणालीलाई कसरी प्रभाव पारेको छ, नेपाललाई […]
बच्चालाई राम्रो बनाउन सिकाउनुपर्ने १० बानी
भनिन्छ नि नानीदेखि लागेको बानी छुट्न गाह्रो छ । त्यसैले नानीदेखिनै राम्रो बानीको विकास गर्न सके त्यो बच्चा जीवनमा सफल हुन्छ । हुन पनि बालबालिका काँचो माटो हुन् । काँचो माटोलाई परिमार्जन गर्दै कुमालेले विभिन्न आकृतिका भाँडाकुँडा बनाएजस्तै बालबालिकालाई पनि विभिन्न ज्ञान र सीप सकाउन सकिन्छ । त्यसैलै पनि उनीहरुलाई सानैदेखि राम्रा कुरा सिकाउन जरुरी […]
तपाईंको सम्बन्ध दिन प्रति दिन बिग्रदैं जानु कतै यी कारण त होईन ?
सम्बन्धको कोमल धागो मनसित जोडिएको हुन्छ । जब सम्बन्ध टुट्छ तब सीधा प्रभाव मनमा पर्छ । हामी सबैजना आफ्नो सम्बन्धबाट केही अपेक्षा र आशा राख्छौं । जब यी आशा–अपेक्षा टुट्छन् तब पीडा हुन्छ । सम्बन्ध जोड्नुभन्दा त्यसलाई जोगाइराख्न निकै गार्हो हुने गर्छ । पछिल्लो समय सम्बन्धलाई टिकाइराख्न पनि निकै कठिन हुँदै गएको छ । धेरै […]
किन रगत जस्तै रातो देखियो इण्डोनेशियाको आकाश?
मंगलबार कुवेती दिनारको भाउ केही बढ्यो, अरु विदेशी मुद्रा भने घट्यो